#OromoRevolution Manni murtii Woyyaanee dhaddacha guyyaa har’aa taa’een barattoota Yunivarsiitii bara 2014 Maaster Pilaani Finfinnee morman jedhamanii qabamanii hidhan irratti murtee cimaa dabarse. Maaster Pilaannii mormaniif qofa barattoota Oromoo hidhaa yeroo dheeraatiin adabuun kan ifatti agarsiisu jibbaa fi tuffii sirni Woyyaanee Oromoo irraa qabuudha jedhu taajjabdoonni.
Akka mana murtii Woyyaanee kanatti barataa Addunyaa Keessoo fi Bilisummaa Daammanaa adabbii hidhaa woggaa afurii fi baatii shaniiti kan irratti murtaaye. Akkasumas, barataa Tashaalee Baqqalaa adabbbii hidhaa woggaa tokkoo fi baatii lamaan akka hidhamu itti murtaayee jira. Adabbiin Tashaalee Baqqalaa irratti dabre waan hanga amma inni hidhmee gadiidha. Kana jechuun Tashaalee Baqqalaa, adabbii isaa murtee mana murtii dura xumurate waan ta'eef, guyyaa muraasa keessati mana hidhaatii ni baya jechuudha. Kuni kan ta’u, garuu, yoo humni tika Woyyaanee murtii mana murtii kan dhagayuu fi kabaju ta’e qofa.
Barataa Abbabaa Urgeessaa, Shawaa Roobititti hidhamee ture, poolisiin mana hidhaa gara mana murtiitti osoo hin fidin hafaniiru. Sababni isaa maal akka ta'e hin beekamu. Garuu rakkoo fayyaa qabaatuu mala sodaan jedhu jira. Barataa Magarasaa Worquu yeroo dheeraadhaaf mana hidhaatti dararamaa fi itti taphatama erga turee boda badii tokko akka hin qabne itti himamee mana hidhaati gadi lakkifamuun isaa beekameera.
Sa’aa kanatti baratoonni, daldaltoonni fi qotee-bultoonni Oromoo kuma heddutti lakkawanman master pilaanii fi duguuggii sanyii mootummaan Woyyaanee Oromoo irraan gayu mormuu isaaniitiif qabamanii manniin hidhaa fi mooraa woraanaa addaddaa keessatti darraraama jira. Lammiileen keenna daandii fi mana isaniitii guuramanii manniin hidhaa keessatti dararaa sadarkaa addaddaa argaa jiran kumaatama. Woyyaaneen namoota hidhaman irratti ragaa sobaan murtii hidhaa irratti dabarsiti. Yeroo tokko tokko ammoo yeroodheeraadhaaf hiitee erga rakkistee fi fundura isanii era dukkaneesitee booda bilisa jedhaa gadi lakkisti. Oromoota saba isaniif jecha hidhamnii dararamaa jiran gadi lakkisiisuu fi erga gadi lakkifamaniis barnootaa fi jireenyatti akka debi’an godhuu irratti oromoon manniin hidhaan ala jiru hundi driqama isaa bayuu qaba. maddi Awash post
Posted by Elias son Jesus at 7:54 AM